Amagumbi amabini abanzi aphindwe kabini eKirkby Mallory - I-Airbnb
Amagumbi amabini abanzi aphindwe kabini eKirkby Mallory
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAmanda
Le ndawo isanda kulungiswa ibonelela ngamagumbi amabini amatsha kwaye abanzi aphindwe kabini lilinye linomabonakude ahlakaniphile, itafile kunye nezitulo ezibini. Kukwakho negumbi lokuhlambela elineshawa entsha kunye nesidlo sakusasa esisisiseko, iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu.
Ibekwe kwilali yasemaphandleni yaseKirkby Mallory, indawo yethu ibonelela ngeembono ezintle kumaphandle eLeicestershire.
Indawo yalungiswa kwiminyaka emibini edlulileyo ngaphezulu kwegaraji yethu emithathu. Indawo yokungena esecaleni ivula izinyuko ezikhokelela kwindawo encinci yokumisa eyahlula amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Kwipaseji phakathi kwala magumbi mabini kukho indawo ebamba i-microwave, ifriji encinci, iketile kunye nenye iti, ikofu kunye nezixhobo zokwenza isidlo sakusasa. Ibhedi yokuhamba, izomisi iinwele kunye ne-wifi nazo zikwabonelelwa.
IKirkby Mallory ilali encinci yasemaphandleni eLeicestershire. Kukho i-newsagents encinci apho unokufumana khona iphepha, isonka kunye nezinye iimveliso zendawo kunye ne-Kirkby House eyonwabileyo eyindawo enkulu yokutya okanye isiselo esizolileyo kunye nesihlwele esinobungane.
Omnye wethu uyakuhlala ejonge ukukubulisa kwaye aphendule nayiphi na imibuzo ekufikeni kwakho nangona kunjalo sisekhaya ukuba kukho nantoni na evelayo. Ukuba ngesizathu esithile asikwazi ukukubulisa sinokushiya imiyalelo yokufika ngesefu yesitshixo.
Omnye wethu uyakuhlala ejonge ukukubulisa kwaye aphendule nayiphi na imibuzo ekufikeni kwakho nangona kunjalo sisekhaya ukuba kukho nantoni na evelayo. Ukuba ngesizathu esithile as…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kirkby Mallory